खोला तर्दै गर्दा एकाएक तुइन चुँ’डिएर एक महिला बे’पत्ता ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/खोला तर्दै गर्दा एकाएक तुइन चुँ’डिएर एक महिला बे’पत्ता !
२० साउन, काठमाडौं । लम्जुङमा तुइन चुँडिएर एक महिला दोर्दी खोलामा बे’पत्ता भएकी छन् । दोर्दी खोलामाथिको तुइनको डोरी चुँडिएर दोर्दी–६ सिमी घर भई कीर्तिपुरबेंसी बस्ने २५ वर्षीया फूलमाया गुरुङ बे’पत्ता भएकी हुन् । उनलाई अझै फेला पार्न नसकिएको लम्जुङका डीएसपी गंगाबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘दुईवटा प्रहरी चौकीबाट खोजी टोली परिचालित भएको छ, तर अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन,’ डीएसपी थापाले भने ।
उनले आज पनि खोजी कार्य जारी राखिएको बताए । स्थानीयले तुइन चुँ’डिएको स्थानबाट करिब पाँच सय मिटर तलसम्म महिलालाई ब’गेको देखेको बताएका थिए । फूलमायासँगै तुइनमा चढेका १७ वर्षीय विकास घले भने चुडिएको डोरी समातेर जोगिएका छन् । उनीहरु जनैपूर्णिमाको दिन जलकन्यादेवी मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदै थिए । यो घ’टना सोमबार मध्याह्नतिरको हो ।
सरकारले दुई वर्षभित्र देशभरबाट तुइन बिस्थापित गर्ने घोषणा गरे पनि अझैसम्म विस्थापित भएको छैन । तुइनबाट जो’खिमपूर्ण यात्रा गर्न बा’ध्य हुँदा मानवीय क्ष’ति भएका समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यसै महिना मकवानपुरमा तुइनबाट खसेर हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ का ७७ वर्षीय कृष्णप्रसाद पराजुलीको मृ’त्यु भएको थियो ।